Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: Facebook ကျင့်ဝတ် ဆောင်ရန်-ရှောင်ရန် များ
ဆောင်ရန်။ နှစ်ကိုယ်ကြား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများ Wall-Timeline ပေါ်တွင် မရေးပဲ Chat / Private Message ပို့၍သာ ပြောရန်
သင့်တွင် လျှို့ဝှက်ချက်များ ဖောက်သည်ချလိုစိတ် ရှိနိုင်သည်။ ဒါကို စောဒက မတက်လိုပါ။ သို့သော် ကာယကံရှင်များ နစ်နာမည့် အရေးကိုလည်း နည်းနည်းတွေးပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ။ သင့်ဆီ အလည်လာသော မိတ်ဆွေများ မူးရူးနေပုံကို သင့်စာမျက်နှာတွင် တင်လိုက်သင့်ပါသလား ?
သူတို့ မူးရူးနေကြသည်ဆိုသော်လည်း လူပုံအလယ်တွင် မူးရူးနေခြင်း မဟုတ်၊ စိတ်ချ လုံခြုံသော သင်၏အိမ် တနေရာတွင် မူးရူးနေခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ နံရံတွင် နားရှိသည်။ Facebook Wall တွင်လည်း နားပေါင်း များစွာ ရှိလေသည်။
ဆောင်ရန်။ ပို့စ်မတင်ခင် တင်သင့်၊ မတင်သင့် သေချာစဉ်းစားပါ။
သင့်တွင် Friends ပေါင်း ရာချီ၍ ရှိနေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ လူချင်းမတူ အသက်ရှူခြင်းလည်း မတူပါ။ ရေမြေ၊ နောက်ခံအကြောင်းချင်းရာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်နေစိတ်ထား စသည် ကွဲပြားနေကြပါမည်။ ကိုယ်တင်လိုက်သည့် ပို့စ်သည် မိမိအတွက် ဘာမှ ထိခိုက်မှု မရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ အမြင်တွင် ထိခိုက်သွားနိုင်သည်။ မိမိပို့စ်ကို အထင်မလွဲစေရန် ဘက်ပေါင်းစုံ စဉ်းစား၍ တင်သင့်မှ တင်ပါ။
ဆောင်ရန်။ အရေးကြီး သတင်း၊ ကိစ္စများ ပို့စ်တင်၍ မပြောပဲ ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကျင့်ဝတ်လို့ ပြောရမည့်အစား လူမှုကျင့်ဝတ် တစ်ခုပါပဲ။ မိတ်ဆွေနှင့် ၎င်း၏မိသားစုထံ အရေးကြီး သတင်း၊ ကိစ္စများ (ဥပမာ နာရေး) ပြောရန် ရှိလာပါက လူအများမြင်အောင် ပို့စ် မတင်ပဲ ဖုန်းနဲ့ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းဆက်မရ၍ အကြောင်းပြပြီး SMS နဲ့ သတင်းမေးခြင်း မလုပ်ရပါ။ ရိုင်းသွားတတ်ပါသည်။
ဆောင်ရန်။ ကွန်းမန့်ထဲတွင် မိမိအတွက် မေးခွန်းပါလာပါက ဖြေပေးရပါမည်။
မိမိတင်လိုက်သော ပို့စ်အား မိတ်ဆွေများက ဖတ်၍ ကွန်းမန့် ပေးခြင်း Like လုပ်ခြင်း ပြုကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ မိမိ ဘက်မှ ပြန်၍ ၎င်းကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကွန်းမန့် ပြန်ပေးရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ကွန်းမန့်တွင် မိမိအတွက် မေးခွန်းပါလာပါက ဖြေပေးရပါမည်။ ဒါ ကိုယ့်ကို ကွန်းမန့်ပေးသည့် မိတ်ဆွေများကို လေးစားသမှုပြုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်ရန်။ နေရာတကာ ကွန်းမန့် လိုက်ပေးခြင်း ဆင်ခြင်ပါ။
ခြွင်းချက်။ မိမိ စိတ်ဝင်စားနေသော သူမှ လွဲ၍ ဖြစ်ပါသည်။
နေရာတကာ ကွန်းမန့် လိုက်ပေးသည့် အကျင့်ကို ပြင်ပါ။ မိတ်ဆွေများ၏ Wall ကို ဝင်ကြည့်သည့် အကျင့် Facebook သုံးသူတိုင်းတွင် ရှိသည်။ ဒါပေမည့် ပို့စ်တိုင်းတွင် ကွန်းမန့် လိုက်မရေးပါနှင့်။ မကောင်းသော အလေ့အကျင့် ဖြစ်ပါသည်။ နေရာတကာ ကွန်းမန့်လိုက်ရေးသူကို “pest” ဟု ခေါ်ကြပါသည်။
Facebook သည် စာရေးဆက်သွယ်သည့် နေရာ ဖြစ်သော်လည်း စာထဲတွင် လေသံကော ဟန်ပန်ကော ရောပါနေတတ်သည်။ စာဖတ်ကြည့်ရုံဖြင့် သင်သည် ထေ့၊ ငေါတတ်သူလားဟု ထင်ခံရနိုင်သည်။ လူတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်အမူအရာနှင့် ဟန်များရှိကြသည်။ ၎င်းသည် စာမှတဆင့် မြင်တွေ့နိုင်လေသည်။
သံသယများကို ခြေဖျက်ရန် နည်းလမ်း တစ်ခု ရှိလေသည်။ ၎င်းမှာ အပြုံး ပင် ဖြစ်သည်။ သင်္ကေတအားဖြင့် :)  ဖြစ်သည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့် သုံးပါက တင်းမာမှုများ ပြေပျောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်လည်း ပြုံးပါ။ ကမ္ဘာကြီးက ပြန်ပြုံးပြပါလိမ့်မည်။ :)
ရှောင်ရန်။ လူစိမ်းများကို မိတ်လိုက်ဖွဲ့ခြင်း ဆင်ခြင်ပါ။
အချို့သူများတွင် Friends အရေအတွက် များများရအောင် လုပ်ချင်စိတ် ရှိကြသည်။ ပြင်ပရှိ မိတ်ဆွေအရေအတွက်ထက် Facebook တွင် Friends အရေအတွက် များနေတတ်တာတော့ မထူးဆန်းပေမည့်။ လူစိမ်းများကို မိတ်လိုက်ဖွဲ့ခြင်းကတော့ ကောင်းသော အမူအကျင့် မဟုတ်ပါချေ။ ဒါကို ဆင်ခြင်လိုက်ရုံဖြင့် သင့်အပေါ် မကောင်းမြင်မှု လျော့ကျသွားမည်။ အမှန်က ဒီလို မကောင်းမြင်မခံရခြင်းကပ သင် အဖြစ်ချင်ဆုံး ကိစ္စပဲ မဟုတ်ပါလား။
ရှောင်ရန်။ ပုံဆိုးပန်းဆိုးများ (‘Unglam’ Shots ) တွင် မိတ်ဆွေများကို တက်ဂ် Tag ခြင်း
ယောင်္ကျားလေးများအတွက် မမှုလောက်သော ကိစ္စဖြစ်နိုင်ပေမည့်၊ မိန်းခလေးများအတွက်တော့ အလွန်ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ကျကျနန ဆတက်တင်ချိန်ရိုက်သော ပုံပင်ဖြစ်သော်ငြား ‘Unglam’ Shots ဖြစ်ပါက မတင်ပါနဲ့။
ရှောင်ရန်။ Status တင်လွန်းခြင်း
သင့် Newsfeed / Noti ကို သင်စစ်ကြည့်ချိန်တွင် လူတစ်ဦးတည်းက သူ့ Status နဲ့တင် ပြည့်နေသည် ဆိုပါစို့။ (၁၀) မိနစ် တစ်ခါ သူဘာလုပ်နေသည်ကို တောက်လျောက် တင်နေသည်ကို မြင်နေရသည် ဆိုပါစို့။ သင် ဘာလုပ်မည်နည်း။ သူ့ status များကို Noti မတက်စေရန် သင် ဆုံးဖြတ်ပေလိမ့်မည်။ ဒီလို အဖြစ်မျိုး ကြုံဘူးကြမယ် ထင်ပါသည်။ အလွန် အာရုံနောက်သော ကိစ္စပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သူမှ သူများတကာ ၁၀ မိနစ်ခြားတစ်ခါ ဘာလုပ်သလဲ မသိလိုကြပါ။ ၎င်းအစား မိမိ၏ Noti တွင် မိတ်ဆွေတိုင်း၏ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စများသာ မြင်လိုကြပါသည်။
ရှောင်ရန်။ အလုပ်ကိစ္စ ပေါက်ကွဲပြခြင်း
Facebook သည် နှစ်ဘက်ချွန် ဓားသွား ဖြစ်သည်။ mutual friendships မှတဆင့် သင့်မိတ်ဆွေ၏ မိတ်ဆွေ၏ မိတ်ဆွေလည်း သင့် Status ကို ဖတ်ခွင့် ရနေနိုင်သည်။ ဒီလို ဖတ်ခွင့်ရခြင်းဟာ တခါတရံကောင်းသော်လည်း တခါတရံမှာ သင်မသိပဲ သင့် Information များကို သူများ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်လေသည်။ သူများ မဖတ်အောင် privacy settings ကို မည်မျှ မြှင့်သည် ဆိုစေကာမူ သင် ပြဿနာ မတက်ချင်ဆုံး သူများ (ဥပမာ။ ဘော့ဇ်၊ လုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်များ) ဆီ နောက်ဆုံး သင့် Status ရောက်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါက်ကွဲတော့မည်ဆိုရင် တခြားနေရာ သွားပေါက်ကွဲပါ။ Facebook ပေါ်တွင် မပေါက်ကွဲပါနှင့်။
ရှောင်ရန်။ မြှောက်တိုင်း ခြောက်တိုင်း လိုက်မရှဲပါနှင့်။
ဒီစာရရင် လူဘယ်နှစ်ယောက်ကို ပြန်ရှဲပါ။ မရှဲရင် သင်ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ်။ စသည့်စာမျိုး၊ ဒီပုံကလေး Like / Share လုပ်ရင် ဘယ်ကုမ္ပဏီကြီးက ပုံထဲက ကလေးအတွက် တစ်ခါရှဲ တစ်ဒေါ်လာ ပေးမည်စသည့်စာမျိုး သင် ရဘူးပါသလား။ မရှဲရ မနေနိုင်အောင် ရေးထားသော စာများကို လက်ခံရရှိသော် လုံးဝ ပြန်မရှဲပါနှင့်။ ကောင်းကျိုးပေမည့် စာများ မဟုတ်ပဲ၊ အရူးထ၍ ရေးသော စာများသာ ဖြစ်ပါသည်။ သင့် စိတ်ကို မကောင်းဖြစ်စေပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထိခိုက်စေတတ်သော စာများသာ ဖြစ်ပါသည်။
သူများ ဒေါသထွက်အောင် မလှုံ့ဆော်ပါနှင့်။ မီးမရှို့ပါနှင့်။
လူတိုင်းတွင် မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ အင်တာနက်တွင် တင်ပြ ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် မိမိအမြင်နှင့် မတူသူများ မိမိနှင့် မတည့်သူများ နောက်ကောက်ကျ ရှုံးနိမ့်အောင် လုပ်ရန် နေရာ မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း မိမိက ပြန်လေးစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သူများသည် မိမိနှင့် အယူအဆ မတူသော မိမိမိတ်ဆွေ၏ မိတ်ဆွေ၏ ရေးသားချက်ကို လွန်ကဲစွာ တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှု ပြုတတ်ကြသည်။ ၎င်းအမူအကျင့်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်ကိုကော မိမိမိတ်ဆွေကိုပါ သိက္ခာကျစေသော အမူအကျင့်ပင် ဖြစ်သည်။ မိမိရေးသော စာများ အပြုသဘောဆောင်သော ကောင်းသောစာများ ဖြစ်ပါက သူများကို မပုတ်ခတ် မတိုက်ခိုက်မိရန် အလေးထား ရေးစေလိုပါသည်။ မိမိကြောင့် သူများတကာ စိတ်မငြစ်နူးပါစေနှင့်။
Essential Facebook Etiquette: 10 Dos and Don'ts မှ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
အပေါ်က စာနှင့် အတူတူ ဖြစ်ပါသည်။ ဇယားဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ရှောင်ရန်။ ပုံဆိုးပန်းဆိုးများ ('Unglam' Shots ) တွင် မိတ်ဆွေများကို တက်ဂ် Tag ခြင်း
ယောင်္ကျားလေးများအတွက် မမှုလောက်သော ကိစ္စဖြစ်နိုင်ပေမည့်၊ မိန်းခလေးများအတွက်တော့ အလွန်ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ကျကျနန ဆတက်တင်ချိန်ရိုက်သော ပုံပင်ဖြစ်သော်ငြား 'Unglam' Shots ဖြစ်ပါက မတင်ပါနဲ့။
နေရာတကာ ကွန်းမန့် လိုက်ပေးသည့် အကျင့်ကို ပြင်ပါ။ မိတ်ဆွေများ၏ Wall ကို ဝင်ကြည့်သည့် အကျင့် Facebook သုံးသူတိုင်းတွင် ရှိသည်။ ဒါပေမည့် ပို့စ်တိုင်းတွင် ကွန်းမန့် လိုက်မရေးပါနှင့်။ မကောင်းသော အလေ့အကျင့် ဖြစ်ပါသည်။ နေရာတကာ ကွန်းမန့်လိုက်ရေးသူကို "pest" ဟု ခေါ်ကြပါသည်။
မှတ်ချက် အပြောအဆို ဆင်ခြင်ပါ။
သံသယများကို ခြေဖျက်ရန် နည်းလမ်း တစ်ခု ရှိလေသည်။ ၎င်းမှာ အပြုံး ပင် ဖြစ်သည်။ သင်္ကေတအားဖြင့် :) J ဖြစ်သည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့် သုံးပါက တင်းမာမှုများ ပြေပျောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်လည်း ပြုံးပါ။ ကမ္ဘာကြီးက ပြန်ပြုံးပြပါလိမ့်မည်။ :)
မှတ်ချက် သူများ ဒေါသထွက်အောင် မလှုံ့ဆော်ပါနှင့်။ မီးမရှို့ပါနှင့်။
Posted by Ko Gyii at 12:12 PM
​​၂၁ ရာစု ကာလနာ သုတ်
Laptop ဝယ်သုံးတာ ၁နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်
၁၅၀၀ အချစ် နဲ့ ၅၂၈ အချစ် တို့ရဲ့ တကယ့်ဆိုလိုရင်း !!
ရော သ မ မွှေ ဖောင့်
ဖုန်းကတ်ပျက် လျှောက်ထားခြင်း နေရာမှား လျှောက်ထားသူ...